dhimma fincila godina amaaraa magaalaa goondar keessatti deemuutti jiruun wol qabatee barreeffamoota oromoonni hawwii ajjeechaa diinaa hedduu arguudhaafi aarii dhangala'uun dhiiga ilmaan oromoodhaa ilaalee dallansuufi haaloodhaan guuttamuudhaan sabboontonni tokko tokko akka waan qabsoon guyyaa sadi qofaa amaarri gochaa jiru kan oromoo caaleetti qabsoo oromoodhaa tuffachuufii godina amaaraa keessatti agaaziin 11 ajjeefamuunillee jajjabina amaaraa godhanii dubbachaa jiraniif hubannoo gayaa kennuu yaaluun barbaada.
Qabsoon oromoodhaa baatii saddeet keessa jirtu tun injifannoolee lakkoofsaan himuufuu ulfaatu nu gonfachiisuun isaallee irraanfatamuu waan hin qabneedha.
1)jalqabarratti finciluma bifa kanaatuu yeroo kana keessatti akkuma addunyaattuu fakkii jalqabaa ta'ee kan eennumtuu akka irraa baruuf afrikaafis ta'ee addunyaadhaaf raabse ‪#‎oromorpotes‬ ykn qabso ummata oromoodhaa bara kanaa akka ta'ellee dagachuu hin qabnu.
2)Qabeenya ilmaan oromoodhaa harka diinaa ture falmachuu keessatti daranturan abaannee hedduus harka diinaatii akka hanbifannes dagachuun gaarii miti.
Isa kam faadha jettuu laata? Ee ni hima.
1)lafti qonnaa harka peresdantii jibuutii ture harkaa deebifamuu isaa,
2)looniif lafa qonnaa harka isaa keessa tures ummanni keenna shuunfachuusaa,
3)akkasuma godina shawaa dhihaa keessattis lafti harka diinaa ture ummataaf deebi'ee jiraachuusaa,
4)Saaminsa magaalaa finfinneetiif karoorfame isa maastar pilaanii jedhamu haqsiisuu danda'uusaa,
5)Bifa gootummaa osoo ajjeefamnuu ciminaafi gara kutannoodhaan galmachaa addunyaatti iyyachuudhaan ragaalee dhugaadhaa qaqqabsiisnee addunyaa raajjessinee gamtaa awrooppaafi ameerikaadhaa raajjessinee qarqaarsa maqaa ummata beelayeetiin addunyaarraa guuraatiin qawweedhuma ittiin nu ajjeesan bitachaa turan saaxiluudhaan akka harkuma ummata adiirraa harka ummataaatti kennamus goneerra,
5)reeffi agaazii hedduus kan habaasneefi hin gabaasin jidduu dirreetti dhifamee ilaalleerra.
6)Qabeenya akka qamadii, xaa'oo fi kkf hedduus woyyaaneerraa saamamee kuunis ibiddaan nyaatamee jira,
7)Harargee bahaa naannoo guraawaa keessatti oromoonni ganna hin beekkamne hidhaa keessatti dararamaa turan humnaan hidhaarraa gadi kan lakkifaman lakkoofsaan kuma hedduu ol kan ta'anis dagachuun sirrii miti,
8)Shawaa dhihaa keessatti oromoonni lakkoofsaan kumaatama ta'an hidhaarraa humnaan lakkifamanii manneen hidhaatis gubataniiru.
9)Godina arsii lixaa keessattis namoonni lakkoofsaan kumaatamaan lakkaawaman akkanuma hidhaarraa lakkifamanii manneen hidhaatis gubataniiru.
Kan beekkamuu qabus ammoo woyyeeneen guyyuma biyyattii san qabatterraayyuu kaasee gochaa isiin adda duree godhatte keessaa inni guddaan oromoorraa hidhannoo hiikuufi oromoota keessaa abbootii garaadhaa qabattee qawwee erga itti hiiteen booda gufuu gootee nu dura dhaabdee sochii nu dhoorkuudha.!!
Godinoota akka amaaraa, tigreefi kan birootirraa sodaa waan hin qabnee irraa hin hiikne ture.
Kanarratti ammoo falmii amaarri guyyaa lama qofa keessatti taasise raajjeffachuufii ajjeechaa woraana agaazii 11tis akka waan guddaa tokko ta'ee qabsoo oromoollee nu dagachiisee worruma fakkii nu godhatee ka'uudhaafuu baatii 8 itti fudhate kanaan nuti maaf akka amaaraa hin taane jechuun qaanyiidha.
Dhugaa rabbii isiniif kakadhaatii na amanaa!!
Gootummaa oromoodhaa gabaabsee yoon isiniif hime kutaan tokko qofti gantuufi yartuu uf keessaa haqee osoo lolee kutaaleen biroo dhakaa tokkollee osoo hin darbin bilisa nu baasuu akka danda'u beektuu? Wollaahi nu baasa.
Gujii faa qabna bar,
Boorana faa qabna bar,
Harargeef shawaa qabna bar
Wolloofi wollagga qabna bar
Jimmaafi arsiis qabna bar,
Baaleefi kan biroos qabna bar,
Osoo ormi nutti hawwee reefuu akka oromoodhaa haa taanu jedhee sochii jalqabaa jiruu uf tuffachuufi xiqqoo ormaa faarsinee guddoo teenna ammoo irraanfachuun maaliifree qomokoo?
Imalli nuti deemaa jirru fagoodha xiqqo.
Aduu bilisummaadhaa gafa argine qofa wol komanna ykn wol dhaaduu dandeenna yaa fira kiyya!!
Kiyyumatu naaf kiyya kiyyuma jabeeffadheetiin kiyyumaan boona.!
Oromoon akkana jedha!!
Harkumaan dhaabanii barbareen na gubdi jedhu.
Billaa abbaan qaretu abbaa qale jedhus.!
QABSOON AMMAS ITTI FUFA!
Posted by Hasan Ismail at 2:19 PM